Madaxwaynaha Napoli oo xaqiijiyay: Waxaa na soo gaaray dalab wayn oo lagu doonayo Higuain” – Gool FM
Madaxwaynaha Napoli oo xaqiijiyay: Waxaa na soo gaaray dalab wayn oo lagu doonayo Higuain”
Liibaan Fantastic July 20, 2016
(Napoli) 20 Luulyo 2016 Madaxwaynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis ayaa qirtay in weerar yahankiisa Gonzalo Higuain laga soo gudbiyay dalab qaali ah.
Aurelio De Laurentiis ayaa xaqiijiyay in kooxda Atletico Madrid ay ku soo dalbatay Higuain 60 milyan oo euro oo lagu daray 2 ilaa 3 laacib si ay u helaan weerar yahanka reer Argentina balse uu iska diiday.
Wuxuuna intaa ku daray in Higuain uusan ku biiri doonin Juventus xitaa haddii ay bixiyaan qiimaha lagu burburin karo heshiiskiisa oo ah 94 milyan oo euro.
“Dalabka kaliya ee laga soo gudbiyay Higuain wuxuu naga soo gaaray Atletico, madaxwaynaha Atletico ayaa bil ka hor isoo hordhigay 60 milyan oo euro oo lagu daray laba ama seddex laacib, laakiin waan iska diiday”.
“Xitaa haddii Juventus ay bixiso qiimaha lagu burburin karo heshiiskiisa (94 milyan oo euro) waa inay ogolaansho ka helaan Higuain, waa inay ogaadaan inuu yahay mid kamid ah taageerayaasha Napoli isla markaana uu ku heeso heesta Napoli” ayuu yiri Aurelio De Laurentiis.
“Ma kulatahay inuu sidaas fudud ugu biirayo koox loo aqoonsanyahay cadawga soo jireenka ee Napoli, markaan dhabta ka hadlo iyaga kalama hadlin arin quseeya Higuain, laakiin wararkaas waxaa ka hadlaya saxaafada oo kaliya”.
“Suurogal ma ahan in Higuain uu ku biiro Juventus, sidey suurogal ku tahay inaad ku celceliso heesta Napoli kadibna aad u dhaqaaqdo Juventus, xiriirka naga dhexeeya Juventus waa mid lamid ah kan ka dhexeeya eeyaha iyo bisadaha”.
RASMI: Weerar yahankii hore ee Man City Alvaro Negredo oo dib ugu soo laabtay horyaalka ingiriiska
GOOGOOSKA: Chelsea vs Wolfsberger 3-0